Posted by coral nyo at 04:07
ပာုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ . . ကြိုဆိုပါတယ်နော်..
အစအဆုံး. နိုင်သလောက်စုဖတ်သွားပါတယ်. နစ်သက်မိပါတယ်။